Boeny: Tontosa ny dingana isan-distrika fandrafetana ny SRAT | Région Boeny
Vita mialohan’ny fehim-potoana ny fitetezana ireo distrika enina amin’ny fanatontosana ny atrik’asa filan-kevitra entina hamolavolana ny Drafi-paritra fanajariana ny tany na ny SRAT (Schéma regional d’aménagement du Territoire).
Araka ny tety andro nomen’ireo manampahaizana manokana avy ao amin’ny Cabinet d’études Géosystèmes Antananarivo izay misahana ny fandrafetana ny SRAT Boeny, dia ny 05 Jiona 2016 no daty farany fanatanterahana ireo atrik’asa filan-kevitra ifotony.
Tsiahivina fa ny SRAT dia Bokin’atontan-kevitra harafitra ho fitaovana hanamora ny famantarana ny zava-misy marina amin’ny sehatra rehetra eny ifotony manerana ny faritra, ka ahafahan’ny mpitondra sy ny mpampiasa vola manapa-kevitra malaky amin’ny sehatra tiana hanaovana fandaharan’asa sy tetik’asa fampandrosoana eto an-toerana, ahahalalana ny tena filan’ny mponina eny ifotony mba hialàna amin’ny baiko midina sy ny tetik’asa diso fiantefa.
Ho an’ny Distrika n’I Soalala, Mitsinjo, Mahajanga I ary Ambatoboeny dia ny 23 hatramin’ny 28 mai 2016 teo no nidina ifotony ireo ekipan’ny Faritra Boeny niaraka tamin’ny Fananan-tany ary ny mpamatsy vola, dia ny fandaharan’asa alemaina PAGE (Programme d’appui à la gestion environnementale)-GIZ, nanatanteraka izany atrik’asa izany.
Telo ireo dingana hahatongavana amin’ny fananana ity SRAT ity, ka eo amin’ny faha-roa izy izao dia ny fandrafetana ireo atontan-kevitra izay notanterahina izao. Raha toa ka ny fanomanana no voalohany ary ny fankatoavana kosa no faha-telo hamaranana azy.
Nivoitra ny olana sy ny tanjaka
Nivoitra nandritra ireo atrik’asa isan-distrka ireo ary fa olana iray tsy isian’ny fampandrosoana ho an’ny distrikan’I Mahajanga I ny tsy fahatomombanan’ny foto-drafitrasan’ny seranan’I Mahajanga, izay mahatonga ireo sambo vaventy hivily lalàna tsy hiantsona eto.
Ho an’ireo distrika telo hafa kosa dia nisongadina ho sakana ho an’ny fivoarana ny fahasarotan-dalàna. Raha ny zava-misy eny anivon’ireo distrika ireo mantsy dia enim-bolana ao anatin’ny taona ihany no azo ampiasaina ny làlana.
Takon’ireo olana ireo araka izany ny harena misy eny ifotony ka tsy afaka hanatsarana ny fiainan’ny mponina. Ho an’Ambatoboeny manokana ohatra dia manana ireo karazana voa-madinika azo aondrana izy ireo, voalohany amin’izany ny Lojy na Black eyes izay tanjaka azo ampiasaina hiadiana amin’ny fahantrana. Ny fisian’ireo toerana manintona mpizaha-tany kosa no anisany nisongadina ho hery manan-danja ho an’I Soalala, Mitsinjo ary Mahajanga I.
Aorian’izao atrik’asa nitetezam-paritra izao dia mbola hisy ny atrik’asa ho an’ny faritra iray manontolo izay hatao eto Mahajanga handravonana ireo hevitra rehetra voahangona mialohan’ny fandrafetana ny Bokin’ny Drafi-paritra fanajarina ny tany ho an’ny Faritra Boeny izay hangatahana fankatoavana farany eo anivon’ireo minisitera rehetra voakasika.